NYI LYNN SECK 18+ DEN: February 2012
Rangoon: Extracted from Twentieth Century Impressions of Burma (2)
Considerably greater area could and might with advantage have been allotted for parks and gardens when all the land was the property of the Government and had little more thanaprairie value, but still Rangoon is much better equipped in this respect than most other towns ofasimilar sue. The first garden provided was the beautiful Cantonment Garden adjoining the Shwe Dagon Pagoda. This was originally planned between 1854 and 1856 by Mr. William Scott of the Calcutta Botanic Gardens, but the south-eastern portion was laid out atalater date by Colonel Oliphant. R.E., at one time Chief Engineer to the Government of Burma. This garden is small but exceedingly pretty. Situated as it is close to the Artillery and European Infantry Barracks in the heart of the Cantonments and onlyashort distance from the town, it is exceedingly popular and much resorted to at all times, but especially when hand performances are given in the evenings. One of the views in the garden is often declared to haveastrong resemblance to the willow pattern, although with the golden Pagoda in the- background it is even more beautiful than the impression which this pattern leaves upon the mind. For some years after the annexation of Upper Burma the garden was much neglected by reason of scarcity of labour in the Commissariat Department. It is now, however, being much better cared for and it is perhaps, inabetter condition at the present time than ever it has been. It is fairly evident that the original intention was to make the garden about twice its present size, but certain people were allowed to obtain house sites onaportion of the ground. The mistake thus made is, of course, practically irremediable now.
The second garden provided in the city was that in Fytche Square, but, unfortunately, the work was very perfunctorily carried out. A little earth was brought from the neighbourhood of the present Scotch Church and the area reserved foragarden was reclaimed toacertain extent,asquare tank being left in one corner. In 1885, Mr. Short, the Secretary to the Municipality, took this garden in hand, and after having raised it to its proper level he did his best to destroy the ugliness of the square tank and presented numerous shrubs and trees. With great public spirit Messrs. Carrapiett and Samuel Balthazar offered to presentastatue of Her Majesty Queen Victoria if the Municipal Committee would putadecent railing round the garden in place of the then disreputable fence. The committee agreed to this, and the statue, which is the only one of Her Majesty in Rangoon, and one of the best specimens of the work of the well-known sculptor Williamson, now adorns the garden. Subsequently Mr. Cohen presented the garden withabandstand.
In the Dalhousie Park the inhabitants of Rangoon haveapossession of which they may be justly proud, and which it is to be hoped that succeeding generations will insist shall at all times be maintained inaworthy manner. There are few, if any, parks in India equal to Dalhousie Park, and visitors often declare with enthusiasm that there is nothing in the world to compare with it. The city is indebted, in the first instance, to the Marquis of Dalhousie for this beauty spot in an otherwise, for the most part, unlovely city. In 1854, after the annexation of Pegu, and during the time he was Viceroy. His Excellency visited Rangoon, and after viewing this spot, was, as he said, "much struck with the beauty of the scenery, and the great and enjoyable advantages which it will add to the residence of those whose duty may bring them to Rangoon."He, therefore, ordered the reservation of the lake, with all the forest land around it, as public property, to be formed intoapublic park. He suggested only thataroad should be made around the margin of the lakes, and left all other detail to the local authority. It is curious and somewhat amusing to read the manner in which the Marquis of Dalhousie's wishes were interpreted by the Chief Commissioner of Burma in 1871. He writes concerning the park: "It appears to the Chief Commissioner quite clear that the inhabitants of the town of Rangoon have no more direct interests and right in this land than they have over the public highways and other lands similarly reserved by Government for the public use and convenience. Until 1871 the only step taken towards the proper laying out of the grounds was the making ofashort, narrow drive. This neglect had also another deplorable effect, for during this time the size of the park diminished from 433 acres to about 300 acres. However, in 1871, Captain Evanson, at that time town magistrate, and than whom Rangoon has never hadatruer friend or more able administrator, took things in hand, and, assisted byasmall committee, did as much as the meagre funds available would permit, and that, unfortunately, was not much. It may he mentioned that Mr. Scott, of the Botanic Gardens, Calcutta, madealong report in 1856, containing suggestions as to the laying out of the park, but no action resulted. Eventually, in 1885, the intentions of the Marquis of Dalhousie were carried into effect, and the management of the park was handed over to the local authority, namely, the Municipal Committee. Captain C. H. E. Adamson was president of the municipality at the time, and he asked Colonel Berkly, Chief Commissariat Officer in Rangoon, Mr. Gilbert, Principal of the High School, and Mr. Hardinge, Secretary of the Agri-Horticultural Society, to advise him regarding the laying out of the park, and it was decided to leave the matter in the hands of Mr. J. Short, Secretary, Rangoon Municipality, who, in an honorary capacity, agreed to undertake the work. At that time the park was almost entirely covered with jungle, and was swarming with snakes, the only portion cleared being where the pavilions now stand and whereaChinaman was allowed to haveamarket garden. There was only room for three carriages to stand, where there are now sometimes two hundred. A small municipal sub-committee was appointed in connection with the park, and it hadafew meetings which were of no practical value. The committee was then allowed to dieanatural death by reason of its not being convened again, after one of the members had suggested that all mango trees should be removed as their wood was brittle and their branches might fall. From that time Mr. Short was allowedafree hand as far as funds would permit, in laying out and improving the land, and he has converted the jungle-covered waste into the park, of which Rangoon is now so proud. The site which the prescience and good taste of the Marquis of Dalhousie selected and reserved was so admirably suited to the purpose ofapark that the laying out was rendered comparatively easy, and the existence of large clusters of magnificent trees in the grounds, made it, toagreat-extent,aquestion only of care and taste in the removal of the superfluous growths and the proper grouping of the remainder, so that the greatest possible number of landscape effects should be produced. The park of today is the best testimony to the success achieved. The eastern portion of the park had unfortunately been entirely stripped of trees before the municipality took charge, but it has been planted out, and is now beginning to look as beautiful as the other portions. The road to the south of the lake, now called Lake Avenue has been doubled in width and both sides have been planted with ortodoxa regin palms, and with wild cinnamon trees down the centre. Bougainvillia bushes on one side, and alamander on the other, finish off the sides. Inafew years this avenue, if properly attended to, promises to be strikingly beautiful.
One of Mr. Short's ideas when he first took charge of Dalhousie Park was the establishment of a. succession of parks and gardens from Dalhousie Park to the Scotch Church, and by the exercise of persistence and of patience this has now been carried into effect. Adjoining Dalhousie Park on the west is the Victoria Memorial Park and the Zoological Garden; which have taken the place of swamps and ugly native villages. This garden, although young, is gaining in beauty as time goes on, and its' popularity has always been great and is growing every day. Want of funds somewhat retards its rapid development, but the trustees, who arc appointed underaspecial act, can congratulate themselves on the excellent work that they have done, and upon the fact that then-efforts are thoroughly appreciated by the crowds that flock to the gardens. Contiguous to the Victoria Park is the garden of the Agri-Horticultural Society, which has taken the place of one of the filthiest villages and tanks that ever defaced Rangoon, the old dhoby village and tank. On the removal of the village only bare land was left, but there is nowapretty garden on one half of this land, which was laid out by Mr. Short, whilst the other half is occupied by plant houses and plantations. It must take some years for the garden to look its best, but already it is well worth visiting. Next to the Agri-Horticultural Gardens are the grounds of the Burma Athletic Association.
The population of Rangoon on the last four occasions on whichacensus was taken was as follows:
1972 ...... 98.745
1881 ...... 134.176
1891 ...... 180.324
1901 ...... 234.881
It will thus he seen that between 1872 and 1901 the population of the town increased by 136.136 souls,afigure which is exceeded by Calcutta alone amongst the cities of the Indian Empire. The increase has been due toalarge extent, to the phenomenal immigration of natives of India, mainly Madrasis. In fact, in 1901, practically half the entire population of the town was composed of Indians, who numbered 117.713. Ten years earlier the figure was 65,910. The Chinese colony arearapidly increasing factor in the development of the town both numerically and commercially. In 1901 the race numbered 11,018, as compared with 8,029 in 1891. Now that an improved service of passenger steamers between China and Rangoon has been promised,arapid increase in numbers may be looked for in the Chinese community. The administration of Rangoon city isasomewhat complicated matter, for three local bodies hold sway within its boundaries namely the Municipal Committee, the Cantonment Authority, and the Port Trust Commission. So far as judicial and general administration is concerned, it isadistrict of Lower Burma and is under the control ofaDistrict Magistrate. Under this official areaCantonment Magistrate and two sub-divisional magistrates.
The town is excellently lighted by electricity, and there isagood and extensive system of electric tramways. Telephonic communications have been established to every part of the town.
Source: Twentieth century impressions of Burma: its history, people, commerce, industries, and resources by Wright, Arnold (1910)e
Digitized and Rekey by NLS
Posted by NLS at 2/23/2012 11:56:00 PM0comments Links to this post
Labels: History, Interesting, Yangon
Rangoon: Extracted from Twentieth Century Impressions of Burma (1)
Extracted from Twentieth Century Impressions of Burma: its history, people, commerce, industries, and resources by Wright, Arnold (1910)
The city of Rangoon isastriking monument to the manner in which Burma has rapidly risen toaposition of importance in the world of commerce. In fifty years it has as developed from an unimportant town set in the midst ofaswamp into the first town in Burma and the fifth town of the Indian Empire; in thirty-years its population has been almost trebled; in twenty yearsasimilar proportionate growth has been shown in its imports, and its exports have been multiplied in value by more than three.
According to the Talaing tradition, the accuracy of which cannot be implicitly trusted, Rangoon had its beginning 585 years before the birth of Christ. The founders were two brothers; Pu and Ta Paw by name, who received (from Gautama himself some of the Buddha' hairs, and enshrined them inapagoda which has since become known as the Shwe Dagon Pagoda. Further records state that the town was refounded in 750 a.d. by the King of Pegu, Punnarika, under the name of Aramana. In 1413 it was occupied by the Burmese, but it was still little beyondacollection of huts and was of no practical importance. Dagon, as the town came to be called, frequently changed hands in the wars which were waged between the rulers of Burma and Pegu. In 1753 Alompra defeated the Talaing garrison at Ava, and under his direction Dagon was practically rebuilt, and the Shwe Dagon Pagoda was thoroughly repaired. By Alompra's orders the name of Dagon was changed to that of "Yan Kon," literally "the end of the war." The modification to the present title of Rangoon was notafar step. Although under Alompra, Yan Kon became the seat ofaViceroy, an incessant struggle for its possession was waged between the Peguans and the Burmese.
About ten years before the dawn of the nineteenth century the British colours were hoisted over the town of Rangoon by the East India Company, andaBritish Resident was appointed in 1798. An interesting description of the town at this period, from the pen of Captain Symes is still extant.
"It stretches along the bank of the river aboutamile, "he wrote," and is not more thanathird ofamile in breadth. The city or myo, isasquare surrounded byahigh stockade, and on the north side it is further strengthened by an indifferent fosse, across whichawooden bridge is thrown. In this face there are two gates, in each of the others only one. On the south side, towards the north, there areanumber of huts and three wharves with cranes for landing goods. A battery of twelve cannon (six and nine-pounders) raised on the bank commands the river, but the guns and carriages are in suchawretched condition that they could do but little execution. The streets of the town are narrow, and much inferior to those of Pegu, but clean and well paved. The houses are raised on posts from the ground. All the officers of the Government, the most opulent merchants, and persons of consideration, live within the fort: ship stockade, and on the north side it is further strengthened by an indifferent fosse, across whichawooden bridge is thrown. In this face there are two gates, in each of the others only one. On the south side, towards the north, there areanumber of huts and three wharves with cranes for landing goods. A battery of twelve cannon (six and nine-pounders) raised on the bank commands the river, but the guns and carriages are in suchawretched condition that they could do but little execution. The streets of the town are narrow, and much inferior to those of Pegu, but clean and well paved. The houses are raised on posts from the ground. All the officers of the Government, the most opulent merchants, and persons of consideration, live within the fort: shipwrights and persons of inferior rank inhabit the suburbs."
During the first Burmese War, in 1824, Rangoon fell into the hands of the British, but it was evacuated three years later tinder the terms of the Treaty of Yandabo. On the outbreak of the second Burmese War in 1852, one of the first actions of the British forces was to occupy the town again, and since then its record has been one of almost uniform prosperity and growth. At the present day, about five-sixths of the total maritime trade of Burma passes through Rangoon.
The modern town is situated on both sides of the Rangoon River at the point of junction to the Poozoondaung Creek. Docks and warehouses line the water's edge, more especially on the northern side, from whence rise the buildings of the mercantile and business quarters, which both in size and solidity of structure compare favourably with the buildings of other large commercial cities in the East. It isasomewhat curious fact, however, that in the world's great centre for the buying and selling of paddy and rice, there is no building in which rice exchange business is transacted, neither is thereastock exchange. Persons interested in the buying and selling of stocks and shares congregate at the corner of Mogui Street and Merchant Street and there transact their business, while millions of tons of rice change hands yearlyafew yards further along the roadway. The main business thoroughfares are Strand Road, Merchant Street, and Dalhousie Street, all running parallel to the river and wharves, and the cross-roads which formaconnection between them. The native quarters occupyaconsiderable portion of the town adjacent to this district and there isalarge centrally situated Chinese quarter.
From the business portion of the town there isagradual rise towards the wooded cantonment, which lies around the let of the eminence where stands, glistening in the sunlight, the famous Shwe Dagon Pagoda. In this locality are most of the more important European residences, airy structures all of them, and generally surrounded by well-kept gardens and grounds.
The visitor to Rangoon carries away with him two well-defined and pleasing impressions. The one is of the pagodas of the town, and more especially of the Shwe Dagon Pagoda; the second is that of the beauty of the parks, the Dalhousie Park standing out clearly in the memory asaspot unrivalled in Eastern cities.
Posted by NLS at 2/23/2012 11:42:00 PM0comments Links to this post
ရန်ကုန် အိမ်တှောရာဘုရားဆိုတာ သာယာဝတီမင်း ရန်ကုန်ရောက်တဲ့အခာ ခေတဿတနေထိုင်တဲ့ မြေပှောမှာ သားတော်ဖြစ်တဲ့ ပုဂံမင်းက တည်ထားခဲ့တဲ့ ဘုရားပော့၊ အခု မြို့မကျောင်းလမ်း အိုရီယမ်တယ်ဟောက် နားမှာ ရှိတာ။ ၂၂ မေ ၁၉၁၃ မှာမှ ထီးတင်ပွဲ ကျင်းပခဲ့တယ်လို့ သိရတယ်။ ပုဂံမင်းကတော့ ထီးမတင်ဘဲ ထားမှာ မဟုတ်ပာဘူး။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ထီးတှောအသစ် တင်တာ ဖြစ်ပာလိမ့်မယ်။ မနဿတလေး အိမ်တှောရာ ဘုရားမှာတော့ ၄ အောက်တိုဘာ ၁၉၁၉ ဘုရားပွဲ ကျင်းပနေတဲ့အချိန် မနဿတလေး ရာဇဝတ်ဝန် ဘလော့ဟင် (Bloxhin) ဘုရားထဲ ဖိနပ်စီးဝင်လို့ ရဟန်းတှောတစ်ပားက ဓားနဲ့ခုတ်သတဲ့။ ဦးဘကလေးရဲ့ ကာတွန်းကြောင့် ဘုရားပှောမှာ ဖိနပ်မစီးရေး တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန် သတင်းစာတွေကနေ တားမြစ် ကြေညာချက်တွေ ထုတ်ပြန်လို့ အုန်းအုန်းကျွက်ကျွက် ဖြစ်နေကြချိန်မှာ၊ အဂဿငလိပ်အစိုးရကတောင် သတင်းစာဆရာတွေဆီကို ဘုရားပုထိုးစေတီ ဥပစာအတွင်းမှာ ဥရောပတိုက်သားတွေ ဖိနပ်စီးတက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းစာတွေမှာ ဝေဖန်ချက်တွေ မရေးသားဖို့ တားမြစ်နေရချိန်မျိုးကြီးမှာမှ သွားယားတဲ့ ဘလော့ဟင် အခုတ်ခံရတာ နဲတောင် နဲသေးတယ် ဆိုရမယ်ထင်ရဲ့။ ဒီဘုရားဟာ ဟိုးရန်ကုန်မြို့ဟောင်း အတွင်းမှာ ပာတယ်။ အရင်ကတော့ သူ့နောက်မှာ မြို့ရိုးတပိုင်းတစကို မြင်ရသေးတယ်လို့ ဆိုပာတယ်။
ငယ်ငယ်တုန်းက ကျောင်းမှာ ချင်းအမျိုးသား တှောလှန်ရေးခောင်းဆောင် ကြွမ်ဘိ(စ်) ဆိုတာ သင်ရတယ်။ သူနာမည်ကို အဂဿငလိပ်က မှတ်တော့ ဆွန်ပက် ဖြစ်သွားရော။ ရန်ကုန်မြို့လယ်က ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်းဟာ ကြွမ်ဘိ(စ်)ကို ဂုဏ်ပြုထားတဲ့ လမ်းပော့။ ဖလမ်းနယ်က ကြွမ်ဘိ(စ်)နဲ့ ဆွန်ပက် ဆိုတာ တစ်ယောက်တည်းပဲဆိုတာ မသိကြတဲ့ သူတွေ အများကြီးဖြစ်မယ် ထင်မိတယ်။ ၁၁ ဧပြီ ၁၉၁၀ မှာ သူကွယ်လွန်တယ်။ အရင်တုန်းက အဲဒီလမ်းက စစ်ကဲမောင်ထှောလေးလမ်းဆိုပြီး နာမည်ပေးထားတာ။ စစ်ကဲကြီးမောင်ထှောလေးက အဂဿငလိပ်အစိုးရကို အကျိုးပြုခဲ့သူမို့ နောင် လွတ်လပ်ရေး ရချိန်မှာ သူ့အစား ဗိုလ်ဆွန်ပက်ကို ဂုဏ်ပြုခဲ့ပုံရတယ်။
တောပုန်းကြီးစံဖဲကို မောင်းမဆည်ရွာအနီးမှာ ငှက်ဖျားနဲ့ လဲနေတုန်း ဖမ်းမိတယ်လို့ဆိုတော့ ဘယ်က မောင်းမဆည်ရွာ လည်းမသိ၊ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ မြို့ရွာအဘိဓာန်ထဲ ရှာကြည့်တော့ မောင်းမဆည်ရွာ နာမည် တစ်ခုပဲ တွေ့ရတယ်။ အခု မနဿတလေးတိုင်း၊ မိတဿထီလာခရိုင်၊ သာစည်မြို့နယ်၊ ကန်ရှည်ကျေးရွာစုထဲ ပာတဲ့ မောင်းမဆည်ရွာ။ ဗိုလ်စံဖဲ ၁၁ ဧပြီ ၁၉၂၈ မှာ မြင်းခြံထောင်ထဲ ကြိုးပေးခံရတယ်။
ဟိုးအရင်တုန်းက ရန်ကုန်တိရိစဿဆာန်ဥယျာဉ်က အခု ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းမှာ ရှိသတဲ့။ ဒာကို ၁၉၀၄ မှ အခု ကန်တှောလေးနေရာကို ပြောင်းခဲ့တာ။ နာမည်က ဝိတိုရိယဘုရင်မ အထိမ်းအမှတ်ဥယျာဉ်တဲ့။ အဲဒီဥယျာဉ် အနောက်မြောက်ထောင့် အခုကျောက်တုံးကြီး လုပ်ထားတဲ့ဘက်မှာ ဟိုးတုန်းက အဂဿငလိပ်သခဿငျိုင်းရှိတယ်။
ကန်တှောလေး အခု အောင်ဆန်းကွင်းနေရာနဲ့၊ ဖဆပလ နေရာကြီးမှာ အရင်တုန်းက ရေအိုင်ကြီး နှစ်အိုင် ရှိခဲ့တယ်။ မြောက်ဘက် ဖဆပလ ရပ်ကွက်ကြီးနေရာက အိုင်ကို ကန်တှောကလေးအိုင် (Kandawgalay Tank) လို့ ခှောပြီး တောင်ဘက်အိုင်ကို ဒိုဘီလိုင်းသစ်အိုင် (New Dobie Tank) လို့ ခှောတယ်။ အရင်တုန်းက ဒိုဘီ ကုလားတွေ အဝတ်လျှောကြတဲ့ နေရာတဲ့။ ကန်တှောကြီးပတ်လမ်းနဲ့ အထက်ပန်းဆိုးတန်းလမ်းထောင့် အခု ဆက်မဆောက်တော့တဲ့ တိုက်ကြီးနှစ်လုံး နေရာက Chinese Market Garden နာမည်နဲ့ ဥယျာဉ်ကြီးပဲ။ ရွှေတိဂုံဘုရား အရှေ့မြောက်မုခ်က သွေးဆေးကန်ကိုတော့ ဆင်ကန်လို့ ခှောကြတဲ့။
သေပန်းပွင့်တာ လှတဲ့ အထဲမှာ တူသာသင်း ဂိုဏ်းက ဦးဘတူကို ဘယ်သူမှ မီမယ် မထင်ဘူး။ ၃၀ ဇန်နဝါရီ ၁၉၃၃ ဘုရင်ခံအိမ်တှော အစည်းအဝေး ကျင်းပနေတဲ့အချိန် ရုတ်တရက် လေဖြတ်လဲကျပြီး ဘုရင်ခံရဲ့ အိပ်ယာကုတင်မှာ တင်ထားချိန်ကျမှ ကွယ်လွန်ခဲ့ပာသတဲ့။ ဘုရင်ခံ မဖြစ်လိုက်ပေမယ့် ဘုရင်ခံရဲ့ ကုတင်မှာ ကွယ်လွန်သူကြီးပော့။ အဲဒီအချိန် မြန်မာပြည် ဘုရင်ခံက ဆာဟူး(ဂ်ျ)လင်းစဒေါင်း စတီဖင်ဆင် (Sir Hugh Lansdown Stephenson) ၂၃ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၃၂ မှာမှ ဘုရင်ခံဖြစ်လာခဲ့တဲ့သူ။ ထီပောက်သွားတယ် ဆိုရမှာပော့။ တူသာသင်း အသင်း ဆိုတာက ဦးဘတူ၊ ဆာဘိုးသာ၊ ဝတ်လုံတှောရဦးသင်း တို့ တည်ထောင်ထားတာ။ ဦးဘတူ ဆိုတာကလည်း ပြောရရင် အစဉ်အလာနဲ့ လူပာပဲ။ ဦးဘတူဟာ နှစ်ပောင်းများစွာ အစိုးရအမှုထမ်းခဲ့၊ အငြိမ်းစားယူခဲ့ပြီးနောက်မှာတောင် လက်ရှိ ဘုရင်ခံရဲ့ မင်းတိုင်ပင်အမတ် ဖြစ်နေပာသေးတယ်။ ကျောင်းပြဋဿဌာန်းစာတွေမှာ အစိုးရအပှော ကြည်ညိုစိတ် ပိုလာအောင် ထည့်သွင်းရေး ဘုတ်အဖွဲ့မှာလည်း ဥကဿကဋဿဌ လုပ်ခဲ့ဖူးပာတယ်။ နောက်ဆုံး အထက်မြန်မာပြည်ကို အဂဿငလိပ်တို့သိမ်းတော့ ညောင်ရမ်းမင်းသား ပာလာတယ်ဆိုပြီး အဂဿငလိပ်တို့ လှေဦးမှာ တင်ခှောလာခဲ့တဲ့သူက ဦးဘတူရဲ့ ညီ ဦးဘသန်း ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုကြပာတယ်။
အလံနီကွန်မြူနစ်ပာတီ ဌာနချုပ်က အခု စမ်းချောင်း မဂဿငလာလမ်း အမှတ် ၁၁။ သခင်စိုးဟာ ဦးသိန်းဖေ(မြင့်) တို့နဲ့ သဘောထား မတိုက်ဆိုင်လို့ ၉ မတ် ၁၉၄၆ မှာ အခြားအပောင်းအပာ ၆ ဦးနဲ့အတူ ကွန်မြူနစ်ပာတီကနေ နှုတ်ထွက်ပြီး ကွန်မြူနစ်ပာတီ (ဗမာပြည်) ဆိုပြီး ပာတီသစ် ခွဲထူထောင်တယ်။ အဲဒာပာတီက နောက်ပိုင်း အလံနီကွန်မြူနစ်ပာတီဆိုပြီး ဖြစ်လာတယ်။ အဲလိုကွဲပြီး တစ်ဂိုဏ်းနဲ့ တစ်ဂိုဏ်း အပြစ်တွေ ဖို့ကြတယ်။ အဲလို ကွဲတာကို ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေး (ဆိုရှယ်လစ်) ပာတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးဗဆွေက ကွန်မြူနစ်ပာတီ နှစ်ခြမ်းကွဲခြင်းဟာ အချောင်သမားဂိုဏ်းနဲ့ အယူသည်းဂိုဏ်း ဗိုလ်လုလို့ ကွဲတာဖြစ်တယ်လို့ သဘောထား တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ ဦးသိန်းဖေကို ဘရောဒာဝာဒီသမား၊ အချောင်သမားရယ်လို့ သမုတ်ကြပြီး၊ သခင်စိုးကိုတော့ ကွန်မြူနစ်အယူသည်း သမားလို့ မှတ်ယူကြပုံပဲ။ မှတ်သားစရာပဲ။
စာတွေဖတ်ရင်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို မနှစ်သက်တဲ့ လူမျိုးတွေကိုလည်း တွေ့လာရတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ဂျပန်ခေတ်က သထုံခရိုင်၊ ပောင်မြို့နယ်၊ သဲဖြူကုန်းရွာ ရွာသူကြီး အဗဿဗဒူရာရှစ်ဇ်ကို သတ်မှုနဲ့ ဖမ်းဆီးဖို့ရာ လက်ထောက်ချတဲ့သူက သခင်ထွန်းအုပ်။ သခင်ထွန်းအုပ်လိုပဲ ဂဠုန်ဦးစောကလည်း ဘုရင်ခံ ဆာဒှောမန်စမစ်ကို ဘာလို့ အောင်ဆန်းကို မဖမ်းသေးတာလဲဆိုပြီး မေးခွန်း ထုတ်ခဲ့သေးတယ်။ ဒာပေမယ့် ဘုရင်ခံဆာဒှောမန်စမစ်က ပားနပ်တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ဖမ်းရင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး ဆူပူလှုပ်ရှားလာနိုင်လို့ ဖမ်းဆီးမည့်ကိစဿစကို သဘောမတူကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း အဲဒီသူကြီးရဲ့ မိန်းမ မအမာ ဆိုသူက သူ့ယောက်ျား အသတ်ခံရတာကို မကျေနပ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ ဘုရင်ခံ၏ကောင်စီ အတွင်းရေးမှူးဆီ တိုင်စာပို့တဲ့ ကိစဿစမှာ အဲဒီလူတွေရဲ့ ပယောဂ မကင်းဘူးလို့ ထင်မိတယ်။ ၂၄ မေ ၁၉၄၆ ဗိုလ်ချုပ်က ဘုရင်ခံကို သွားတွေ့တော့ စကားစမြည် ပြောရင်း ဘုရင်ခံက အဲဒီကိစဿစကို မေးတယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်ကလည်း သူလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း ဗြောင်ပြောတယ်။ ဘုရင်ခံကလည်း ခေသူတော့မဟုတ် အဲဒီ ဦးစောရော သခင်ထွန်းအုပ်ရောကို ဘုရင်ခံအမှုဆောင်ကောင်စီမှာ ဝန်ကြီးရာထူးတွေ ပေးပြီးမွေးထားလိုက်တယ်။ ဒောက်တာဘမှောကလည်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို သိပ်သဘောကျပုံတော့ မရဘူး။ သူရေးတဲ့ Break Through In Burma ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကိုဖတ်တော့ ရဲဘှောသုံးကျိပ်ထဲမယ် အားလုံးထက် ဗိုလ်ရန်နိုင်ကို ချီးမွမ်းခန်း အတှောဖွင့်ထားတာ တွေ့ရတယ်။ နောက်တော့မှ ဗိုလ်ရန်နိုင်က သူ့ကိုယ်ရံတှော လုပ်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်မှန်း သိရတော့တယ်။ သိပ်တှောလွန်းလို့ ထင်ပာရဲ့ သူ့သမီးနဲ့တောင် ပေးစားပြီး သားမက်တှောခဲ့တယ်။ ဒီဘက်ခေတ်မယ်တော့ အဲဒီစာရင်းထဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေကို ထည့်ရမယ် ထင်တယ်။ သူ့လက်ထက်မှာပဲ ပိုက်ဆံတွေလည်း ပုံပြောင်းကုန်တယ်။ အခန်းထဲက ပုံတွေလည်း ဖြုတ်ကြရတယ်။
ကွန်မြူနစ်တွေ ဆင်စွယ်ရွာ လူသတ်ပွဲဆိုတာ ဘာဟုတ်သေးလဲ။ ဂျပန်ခေတ်တုန်းက မှောလမြိုင် ကုလားကုန်းရွာ မဟာမိတ်လေထီးစစ်သားတွေကို အကူအညီပေးလို့ဆိုပြီး ၈ ဇူလိုင် ၁၉၄၅ မှာ အစုလိုက်အပြုံလိုက် အသတ်ခံရတာက ပိုဆိုးတာပော့။ အဲဒီရွာမှာ အိမ်ခြေ ၁၃၀ နဲ့ လူဦးရေ ၇၀၀ လောက် ရှိသတဲ့။ ၆၃၇ ဦး သတ်ဖြတ် မီးရှို့ ခံရတယ်။ အမိန့်ပေးတဲ့သူက ဗိုလ်မှူး အိချိကာဝ၊ အကောင်အထည် ဖှောတဲ့သူက ဗိုလ်ကြီးဆကာမာကိ။
အင်္ဂလိပ်ခေတ်က ဆာဘွဲရတဲ့ မြန်မာတွေ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိတယ် အတိအကျ မသိဘူး။ မှတ်သားမိသလောက်တော့ ဆာဘိုးသာ (သူဌေး)၊ ဆာစံစီဖိုး (ဆရာဝန်)၊ ဆာဂျေအေမောင်ကြီး (ခေတ္တဘုရင်ခံ)၊ ဆာပေါ်ထွန်း (ပြည်ထဲရေးနှင့် တရားရေးဌာန)၊ ဆာထွန်းအောင်ကျော် (ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်တော်ဌာန)၊ ဆာဘဦး (ဒေါက်တာဘဦး၊ သမဿ္မတ)၊ ဆာမောင်ဘ၊ ဆာမောင်ခင်၊ ဆာစောချယ် (သီပေါစော်ဘွားကြီး)၊ ဆာစ၀်မောင်(စောမောင်)၊ ဆာဦးသွင်၊ ဆာမြဘူး (တရားရေးဝန်ကြီး)၊ ဆာရီအလိမ်(သစ်တောဝန်ကြီးချုပ် ၁၉၂၆)
Last Updated: 27.04.2012
Posted by NLS at 2/18/2012 11:03:00 AM2comments Links to this post
ရန်ကုန်မြို့ကြီးတွင်၊ ရှေးမြန်မာမင်းတို့ လက်ထက်တှောအခာက။ မြို့၏ အခြေအနေ၊ ရပ်စုရပ်ကွက်တို့ တည်ယှိသည်ကို ဖှောပြခြင်းအကြောင်း။
၁။ ဘုရားသွားသော ဓာတ်ရထားလမ်း။ မြင်းပြိုင်ကွင်းအနီး။ ကျားကူးသိမ်ကြီး ယှိသည်။ ရှေးက ၎င်းသိမ် အရှေ့အနီး။ ဘုန်းကြီးဦးညောင်ကျောင်း ယှိသည်။ ၎င်းအရှေ့ ဘုန်းကြီးဦးဝိမလကျောင်း ယှိသည်။ ၎င်းအရှေ့ ဘုန်းကြီး ဦးဥတဿတမကျောင်း ယှိသည်။ [မှတ်ချက်။ ရှေးက ဦးဝိစာရလမ်းကို Voyles Road ဟုခှောသည်။ ထိုအခာက ဗွိုင်းလမ်းသည် ယခု တပ်မတှောခန်းမရှေ့နားရှိ ပန်တျာလမ်းအထိသာ ရှိသည်။ တပ်မတှောစစ်သမိုင်းပြတိုက်၊ တပ်မတှောခန်းမ၊ အမျိုးသားရေကူးကန်နေရာ၊ မင်းမနိုင်အိမ်ရာများသည် ထိုကာလက မြင်းပြိုင်ကွင်းကြီး ဖြစ်သည်။ ကျားကူးကျောင်းတိုက်ကို ယနေ့တိုင် ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်း၊ တပ်မတှော စစ်သမိုင်းပြတိုက်ဘေးတွင် တွေ့မြင်နိုင်သည်]
၂။ ဘုရားသွားသော ဓာတ်ရထားလမ်း အရှေ့ဖက်အနီး ယခုတိုက်အိမ်ဝင်းခြံအတွင်းရှိ စေတီသည် စကြာဝန်ကြီးဘုရား ခှောသည်။ ၎င်းဘုရားအရှေ့ ပန်းပဲတန်းလမ်း။ ၎င်းအရှေ့ မြို့ပြင် အရှေ့တောင်ထောင့် အရပ်တွင်။ မြမဿမာ။ ကလယ်။ ပသီ။ တရုတ်။ ၎င်းလူမျိုးတို့ သုသဿသန်သင်းချိုင်းကြီး ယှိသည်။ ယခု ဆူးလေဘုရား မြောက်ဘက်လမ်း။ ဖရေဇာလမ်းထောင့်တွင် ကုလားသင်းချိုင်း ဝင်းခြံကာလျက် ယှိသေးသည်။ [မှတ်ချက်။ စကြာဝန်ကြီးဘုရား ဆိုသည်မှာ ဘိုးတှောဘုရား လက်ထက်က စကြာဝန်ကြီးတည်သော လောကမာရ်အောင် ဘွဲ့အမည်ရ ဘုရားဖြစ်သည်။]
၃။ ယခု သိမ်ကြီးဈေး အရှေ့တောင်ထောင့်။ ပန်းပဲးတန်း။ သံဖြူတန်းလမ်း ၂ ခုအကြားတွင်။ ရှေးက မှန်ကင်းကျောင်းတိုက် ယှိသည်။ ဂိုဏ်းထောက်ကြီးဦးရွှန်း နေသည်။ ကျောင်းတှောတိုက်လဲး ခှောသည်။
၄။ ၎င်း မှန်ကင်းကျောင်းတိုက်။ တောင်ဘက်တွင်။ သျှင်ပင်ရွှေကြိုး ဘုရားစေတီတဆူ ယှိသည်။ အမြင့် အတောင် ၃၀ ခန့် ယှိသည်။ မဟာရံတံတိုင်း မီးတားမယှိ။ ဘုရားစေတီပတ်လည်။ တဲ။ အုံ။ ရုံ။ ထိုးလျက်။ ကစားကရိယာ အမျိုးမျိုးနှင့်။ အလောင်းအစားပြုလုပ် နေထိုင်ကြသူများစွာ ယှိသည်။ ဘုရားပတ်လည် လူနေအိမ်ခြေ ယှိသည်။
၅။ ဆူးလေဘုရားအရှေ့။ ယခုယှိသော ပန်းခြံနေရာ၏ အနီး အရှေ့ဘက်။ တောင်ဘက်တွင် ကုလား။ မြမဿမာများ နေထိုင်သော အိမ်ခြေယှိသည်။ ဆူးလေဘုရားမြောက် ဘုန်းကြီးဦးကုလားကျောင်း ယှိသည်။ ဘုန်းကြီးဦးကုလားသည် ပဲးခိုးမြို့ဆရာတှော ဦးမာ၏ ဂိုဏ်းထောက် ဖြစ်သည်။ [မှတ်ချက်။ ယခု မဟာဗနဿဓုလပန်းခြံ နေရာမှာ အဂဿငလိပ်ခေတ်က Fytche Square ပန်းခြံဖြစ်သည်။]
၆။ ယခု ဆေးရုံဟောင်းအရှေ့။ မဂိုတန်းလမ်း အနောက်ဘက်နေရာတွင် ရှေးက တောင်ဘီလူးကျောင်းတိုက် ယှိသည်။ ယခု ခရေပင် ၂ပင် ယှိသေးသည်။ [မှတ်ချက်။ ဆေးရုံဟောင်းမှာ ယခု ဗိုလ်ချုပ်ဈေး မျက်စောင်းထိုးရှိ လေဟာပြင်ဈေး နေရာပင် ဖြစ်သည်။]
၇။ ယခုထောင်ကြီး နေရာတွင် ရှေးက ဥယျာဉ်တှော ပြုလုပ်ထားသည်။ [မှတ်ချက်။ ထောင်ကြီးနေရာမှာ ယခု ဘုန်းကြီးလမ်းနှင့် ဗိုလ်ချုပ်လမ်း ထောင့်မှ သူနာပြုတကဿကသိုလ် နေရာပင် ဖြစ်သည်။ ၎င်း ထောင်ကြီး၏ တောင်ဘက်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၏ တဘက်တွင် ထောင်ဥယျာဉ်ဟူ၍လည်း ရှိခဲ့ဖူးသည်။]
၈။ တိရစဿဆာန်ရုံဥယျာဉ်ဟောင်း။ ယခု ဆေးရုံသစ်ကြီးနေရာတွင် ရှေးက တရုပ်လူမျိုးတို့ ဆောက်လုပ်ထားသော ဘုံအိမ်ကျောင်းတစ်ခု ယှိသည်။ [မှတ်ချက်။ ဆေးရုံသစ်ကြီးမှာ ယခင် လေဟာပြင်ဈေး နေရာတွင် ရှိနေရာမှ ယနေ့ခေတ် နေရာသို့ အသစ်တည်ဆောက် ပြောင်းရွှေ့ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်တိရစဿဆာန်ရုံဟောင်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းတစ်နေရာတွင် ရှိခဲ့ဖူးသည်ဟုသာ သိရပြီး နေရာအတိအကျ မသိခဲ့ရသှောလည်း ယခုစာအရ ယခုဆေးရုံသစ်ကြီးနေရာသည် ဟိုးရှေးယခင် ရန်ကုန်တိရစဿဆာန်ဥယျာဉ်၏ မူလနေရာဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ၁၉၁၄ ရန်ကုန်မြေပုံအရ ယင်းနေရာကို ယခင်က Agri Hortic Gardens ဟု ခှောကြောင်း သိရသည်။]
၉။ ယခု သိမ်ကြီးဈေး အလယ်နေရာတွင်။ ရှေးက ဆူးလေဘုရားပုံ စေတီကြီးတဆူ ယှိသည်။ ရွှေတိကုံ။ နောင်တှောကြီးစေတီထက် ကြီးသည်။ စေတီအရှေ့ဘက်ကပ်လျက်။ ယခုတည်ရှိသော သိမ်ကြီးတန်ဆောင်း အာရုဏ်ခံ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသိမ်ကြီး၏ တောင်ဘက်တွင် တပ်ကလေးဈေး ယှိသည်။ ၎င်းအရှေ့မြောက် ဘုန်းကြီးဦးပုညကျောင်းတိုက် ယှိသည်။
၁၀။ ဆေးရုံဟောင်းတောင်ဘက်။ ယခုယှိသော မဟာပိနဿနဲတိုက်။ ပုဏားတိုက်ဟူ၍ ခှောသည်။ ရှေးကအတိုင်း တည်ယှိသည်။ ၎င်းအနောက်မြောက်ထောင့်တွင်။ ဒူးရင်းဆရာတှောကျောင်းတိုက် ယှိသည်။ ၎င်း ဆရာတှောသည် ရန်ကုန်မြို့ ဂိုဏ်းအုပ်ကြီး ဖြစ်သည်။ ဆေးရုံဟောင်းနေရာတွင်။ ဘုန်းကြီးခင်ကြီးဖြူကျောင်းတိုက် ယှိသည်။
၁၁။ ယခု ဟိုက်စကူးကျောင်းနေရာတွင် ဘုန်းကြီးဦးမေဒာ။ ဦးအာဒိစဿစတို့ကျောင်းတိုက်။ အရှေ့အနောက်ယှဉ်လျက် ယှိသည်။ ၎င်း ဟိုက်စကူးကျောင်းအရှေ့။ ယခု အဂဿငလိပ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း နေရာတွင်။ ဂိုဏ်းထောက်ဆရာတှော ဦးဂနဿဓကျောင်းတိုက် ဖြစ်သည်။ ၎င်းကျောင်း အရံအတွင်း။ ရွှေရေဧး ခှောသော ရေတွင်း တခု ယှိသည်။ သောက်တှောတွင်းလဲး ခှောသည်။ ကုန်းဘောင်မင်း သောက်တှောမူသည်ကို အစွဲပြု၍။ သောက်တှောတွင်းဟု ထင်ရှားသည်။ ယခု ရေတွင်းကို မြေဖို့လိုက်သဖြင့် ကျောင်းဝင် ရထားလမ်းဖြစ်လျက် ယှိသည်။ [မှတ်ချက်။ မည်သည့် ဟိုက်စကူးကျောင်းကို ဆိုလိုသည် မသိရသှောလည်း  အရ လသာ(၂) နေရာဟု ခန့်မှန်းရလေသည်။ ယခင်က ဆာအာသာဖယ်ရာ နေထိုင်ခဲ့သော အိမ်ရာမှာ ဦးအာဒိစဿစကျောင်းအရံအတွင်း ကျရောက်သည်ဟု သိရသည်။ ယခု စိန့်မေရီဘုရားရှိခိုးကျောင်း နေရာမှာ ယခင်က ဦးဂနဿဓကျောင်းတိုက် ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်]
၁၂။ ယခု သရက်တောကျောင်းတိုက် နေရာတွင်။ ရှေးက တောကြီးဖြစ်လျက် ယှိသည်။ ရွှေဘိုဘုရင်လက်ထက်။ ရန်ကုန်မြို့ဝန် ဦးယှမ်းကလေး။ သံတှောဆင့်ရေဝန် မောင်တူတို့က။ ကျောင်းဆောက်၍ အင်းဝမြို့က ကြွလာသော။ ဘုန်းတှောကြီး ဦးမဏိကို ပင့်၍ တင်လှူ ကိုးကွယ်ကြသည်။ ပဌမဦးစွာ ဆောက်သော ကျောင်းဖြစ်သည်။ သာကရာဇ်။ ၁၂၁၄ ခုနှစ် ဒုတိယအရေးတှော ဖြစ်ပြီးနောက်။ ဖယ်ရာမင်းကြီးက။ ဤနေရာတွင် ကျောင်းပောင်း ၅၀ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်စေ။ သဃဿငာတှောတို့အတွက် ကျောင်းမြေအတည် ဂရန်ပေးအပ်လေသည်။ သရက်တောကျောင်းတိုက်ဟု အမည်ထင်ရှားခြင်း ဖြစ်သည်။
၁၃။ ဤအခာက ဖယ်ရာမင်းကြီး နေအိမ်သည်။ ယခုဟိုက်စကူးခှော ကျောင်းကြီး၏ အနောက်ဖက်ယှဉ်လျက်။ အစိုးရကောလိပ်ကျောင်းသစ် နေရာတွင် ယှိသည်။ ဖယ်ရာအိမ်ဟူ၍ အဂဿငလိပ်အကဿခရာ ကမဿဗည်းတပ်လျက် ယှိသည်။ ၎င်းနေရာ မြမဿမာမင်းလက်ထက်က ဘုန်းတှောကြီး ဦးအာဒိစဿစကျောင်းအရံအတွင်း ကျသည်။ [ဆာအာသာဖယ်ရာ နေထိုင်ခဲ့သော အိမ်ရာကို နောက်ပိုင်းတွင် ဖယ်ရာပြတိုက် (Phayre Museum) အဖြစ် ပြုလုပ်ထားခဲ့ပြီး ယခုခေတ် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဝင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနှင့် လမ်းမတှောလမ်းထောင့် နေရာ ဖြစ်သည်]
၁၄။ ယခု ကွမ်းခြံမီးရထားရုံကြီး တောင်ဘက်။ မန်ဂိုမာရီလမ်းကပ်လျက်။ ဈေးအရှေ့ဘက်တွင် တည်ယှိသော ဘုန်းတှောကြီးကျောင်းတိုက်သည်။ မြမဿမာမင်းလက်ထက်က သစ်ဆိမ့်ကုန်းကျောင်းတိုက် ခှောသည်။ သစ်ဆိမ့်ကုန်းခှောသည်မှာ။ သစ်ဆိမ့်ပင်ကြီးတပင် ပောက်လျက်ယှိသည်ကို အစွဲးပြု၍ ခှောသည်။ အဂဿငလိပ်မင်း လက်ထက်တှောအခာ။ မှောလမြိုင်မြို့က။ ဘုန်းတှောကြီးတပား ကြွလာသီတင်းသုံးတှောမူသည်ကို အစွဲးအလန်း အမှတ်ပြု၍။ မှောလမြိုင်ကျောင်းဟု ယခုတိုင် ထင်ယှားလေသည်။
၁၅။ ယခု ထောင်ကြီး အနောက်ဘက်။ ရေခဲစက်ရုံ၏ အနောက်မြောက်ဘက်အနီး။ ကုန်းတန်းကြီးတွင်။ မြမဿမာမင်းလက်ထက်က။ ဘုရားငုတ်တိုကြီးတဆူ ယှိသည်။ ၎င်းစေတီကြီးကို ပှောတှောမူဟု ခှောကြသည်။ ၁၂၁၃ ခုနှစ်တွင်။ ၎င်းစေတီငုတဿတိုက ရောင်ခြည်တှောလွှတ်သောကြောင့်။ ဘုရားပွဲတှော ပြုလုပ် ပူဇှောကြပာသည်။ ယခု အဂဿငလိပ်စာသင် ကုရင်ကျောင်းနေရာ ဖြစ်သည်။ [မှတ်ချက်။ ယခုခေတ် အလုံ ဆက်သွယ်ရေးစခန်းရှေ့ရှိ ကရင်ကျမ်းစာသင်ကျောင်းနေရာ ဖြစ်သည်။ မွန်အမည် ကျိုက်ဒေးတဲး ခှောသည်။ မြန်မာလို ကျောက်ကုန်းဘုရား ဆိုလိုသည်။ အပိုဒ် ၄၈ လည်းရှုပာ]
၁၆။ ၎င်းကျောင်း အနောက်ဘက်နေရာတွင်။ ရှေးက သင်းချိုင်းနေရာ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသင်းချိုင်းအနောက်။ အလုံရပ်ဟု ခှောသည်။ ယခု အလုံဂတ်တဲ နေရာ၏ မြောက်ဖက်ကုန်းတန်းတွင်။ ရှေးက သုဘရာဇာသင်းချိုင်းနေရာ ဖြစ်သည်။
၁၇။ ဆူးလေဘုရားအနီး။ ဓာတ်ရထားလမ်းခြားလျက်။ အနောက်မြောက်ထောင့်တွင်ယှိ ကုလားပလီနေရာသည်။ ဆူးလေဘုရားမြေ ဖြစ်သည်။ ၎င်းပလီ အနောက်မြောက်အနီးတွင်။ ရှေးက ဆူးလေနတ်စင် ယှိသည်။ နတ်ထိန်း မရေး ဆိုသူ အမြဲး နေသည်။ [မှတ်ချက်။ ၃၂ လမ်းထိပ်ရှိ ဗလီနေရာကို ဆိုလိုသည်]
၁၈။ ဆူးလေဘုရား အရှေ့မြောက်။ ယခု မြူနီစပယ်ရုံး အရှေ့တွင်။ ရှေးက မသာတံခား ဟူ၍ ယှိသည်။ တောင်မြောက် သွားသောလမ်း ယှိသည်။ ၎င်းလမ်းအရှေ့ ခွေးသေဝဘုရားငုတဿတို ယှိသည်။ ၎င်းဘုရား အနောက်တွင်။ ခွေးသေဝသိမ်တခု ယှိသည်။ ၎င်းဘုရားငုတဿတိုရှေ့တွင်။ ပန်းတောကျောင်းဟူ၍၎င်း။ ခယေပင်ကျောင်း ဟူ၍၎င်း ယှိသည်။ ၎င်းကျောင်းအရံအတွင်းက။ ရေတွင်းကို ကဒတ်ငန်းရေတွင်း ခှောသည်။ ၎င်းရေတွင်း အရှေ့ဘက်။ မြေတံတားလမ်း ယှိသည်။ [မှတ်ချက်။ မဟာဗနဿဓုလလမ်း၊ ၃၆ လမ်းနှင့် ပန်းဆိုးတန်းလမ်းကြား အေဘီစီဘား အနီးတွင် ဘုရားငယ်တစ်ဆူ ရှိသည်။ ၎င်းဘုရားမှာ ခွေးသေဝဘုရား ဟုတ်မဟုတ် မသေချာပေ]
၁၉။ ယခု စပတ်လမ်း။ ကာဝီသူဌေးတိုက်နေရာသည်။ ရှေးက ရွှေကျင်မင်းကြီးအိမ်ရာ ဖြစ်သည်။ [မှတ်ချက်။ ဗိုလ်အောင်ကျှောလမ်း ဖြစ်သည်]
၂၀။ ဆူးလေဘုရား တောင်ဘက်စောင်းတန်းလမ်းမှာ။ ရှေးက ကျုံးကူးတံတား ယှိသည်။ ၎င်းတံတားမှာ ရင်ခွဲးစရပ်ကြီးတခု ဆောက်ထားလျက် ရှိသည်။
၂၁။ ဆူးလေဘုရား အနောက်စောင်းတန်းလမ်း။ ယခု ဒီဇူဆာဆေးတိုက် မြောက်။ ကျုံးပတ်လည်ရေဝိုင်းလျက်။ ကျွန်းငယ်တခုပှောတွင်။ ရေလယ်ကျောင်းဟု ခှောတွင်လျက် ယှိသည်။ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတှောကြီး ဦးမြတ်ခဲး ခှောသည်။ စစ်ကဲး ဦးမြိုင် ဆရာဖြစ်သည်။
၂၂။ ယခု ဘုရားလမ်း။ ကျားကူးသိမ်တောင်။ ပဲးခိုးကျောင်းတိုက် ယှိသည်။ ၎င်းကျောင်းတိုက်အနောက်။ ယခု မြင်းပြိုင်ကွင်း အလယ်တွင်။ မြမဿမာစစ်ကဲး ဦးမြိုင့်အိမ် ယှိသည်။ ၎င်းအိမ် အရှေ့တောင်တွင် မဂဿငလာဈေး ရှိသည်။ [မှတ်ချက်။ အမျိုးသားရေကူးကန်နှင့် အိုလံပစ်ဟှောတယ်ဝင်းနေရာ ဖြစ်မည်]
၂၃။ ယခု ဂှောရာကုန်း။ ရှေးက ဆံတှောကြိုလမ်း။ အမတ်ကြီး ညီအစ်ကို ၂ ယောက် စေတီ တဆူစီ အရှေ့အနောက် တည်ထားသည်။ အကိုတည်သော စေတီကို။ တလိုင်းဘာသာ။ ကျိုက်ခပောက်စနွတ် ခှောသည်။ မြမဿမာလို ခပောက်ကား ၇ တောင်။ စနွတ်ကား တာ ခှောသည်။ ကျိုက်ကား။ ဘုရား ခှောသည်။ အဓိပဿပာယ်မှာ ၇ တောင်တာဘုရား ဆိုလိုသည်။ ဘကြီးတှောဘုရားဟု မြမဿမာမင်းလက်ထက်က တွင်သည်။ ၎င်းဘုရားနေရာ ယခု နေအိမ် ဖြစ်နေသည်။
၂၄။ အရှေ့ဘက် ညီတည်သော ဘုရားကို။ တလိုင်းလို။ ကျိုက်ခပောက်ဆွတ် ခှောသည်။ မြမဿမာလို ခပောက်ကား ၇ တောင်။ ဆွတ်ကား ခုန်နိုင်သည်။ ကျိုက်ကား ဘုရား ခှောသည်။ အဓိပဿပာယ်မှာ။ ၇ တောင် ခုန်နိုင်သောဘုရား ဆိုလိုသည်။ မြမဿမာမင်းလက်ထက်။ မင်းလက်ဝဲးဘုရား တွင်သည်။ ယခု အိမ်ဖြစ်နေသည်။
၂၅။ တိကုန်စေတီတှောကြီးအရှေ့ဘက် စောင်းတန်းအဆင်း။ သရက်ပင်ကြီးယှိသည်။ ၎င်းသရက်ပင်ကြီး၏ အရှေ့တွင်။ ရှေးက။ ကိုးတုံ စရပ်ကြီး (၇) ဆောင် ယှိသည်။ လူတထောင်ခန့် တည်းခိုနိုင်သည်။ ၎င်း စရပ်ကြီး အနောက်လမ်းခြားလျက်။ ဒူးရင်းဥယျာဉ်တှော ယှိသည်။ ၎င်းဥယျာဉ် အရှေ့ဘက်။ မြေစရပ်ကြီးတခု ယှိသည်။ လူပောင်းတထောင် တည်းခိုနိုင်သည်။ ဒူးရင်းဥယျာဉ်သည်။ ယခု သုဓမဿမာစရပ် နေရာကျသည်။ ကိုးတုံစရပ်ကြီးသည် ဘုရားအရှေ့ဘက် စောင်းတန်းလမ်း။ အုတ်တံတားအဆုံး။ မြောက်ဘက်သွားသောလမ်းနေရာ မြေကွက် ဖြစ်သည်။
၂၆။ ရှေးက ကြားတောရကျောင်းတိုက်။ ဘဟန်းကျောင်းတိုက် နေရာများသည်။ ဆင်နေကျားအောင်းဖြစ်သော တောကြီးစိမ့်ကြီး ဖြစ်လျက်ယှိသည်။ ဖုန်းဆိုးနေရာ။ ကျခတ်ဝားများလဲး ပောက်လျက် ယှိသည်။
၂၇။ တိကုန်ဘုရားကြီးမြောက်ဘက်စောင်းတန်းအဆင်း။ ရေကန်ကို သွေးဆေးကန် ခှောခြင်းသည် မဟုတ်။ နိမ့်ယှိုင်းသော ရှိုကြီးကို ကန်ဘောင် အရှေ့ဘက်က ဆည်းကာထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းကန်ကြီး မြောက်ဘက်ကုန်းသည်။ ရှေးက ကုသဿသနဿနာရုံဘုရား တည်ထားလျက် ယှိသည်။ ကုသဿသိနဿနာရုံကြီးကုန်း။ ၎င်းအနောက်ဘက်က။ ကုသဿသိနဿနာရုံကလေးကုန်းဟု ခှောတွင်လျက် ယှိသည်။ ယခု ဆင်ကုန်း ခှောကြသည်။ သွေးဆေးကန်အစစ်မှာ။ အုတ်မဟာရံတံတိုင်း ကာထားသော။ ရေကန်ငယ်ကို ဆိုလိုသည်။
၂၈။ တိကုန်စေတီတှော။ တောင်ဘက်။ ဓာတ်ရထားလမ်း စရပ်တန်းအဆုံး။ ရှေးက စေတီ ၂ ဆူနှင့်။ ခြသေဿင့ ၂စီး တည်ထားလျက် ယှိသည်။ မုတ်ဦးစေတီ။ မုတ်ဦးခြသေဿင့ ခှောသည်။ ယခု စေတီတဆူ မယှိ ဖြစ်သည်။ အနောက်ဖက် မျက်နှာကလဲး ဤနည်းအတူ ယှိသည်။ ယခု မယှိဖြစ်သည်။ ၎င်းများကို ရှင်စောပု ကုသိုလ်ဖြစ်သည်။ အရှေ့ဖက်။ မြောက်ဖက်က မယှိဖြစ်သည်။ ၎င်းခြသေဿင့စေတီများနှင့်အညီ။ ကုန်းတှောကို မဟာရံတံတိုင်း ဝိုင်းကာလျက် ရှေးက ယှိလေသည်။
၂၉။ တိကုန်ဘုရားကြီး ကုန်းတှောအောက်ခြေ။ တောင်ဘက်ဥယျာဉ်နှင့်ရေကန်။ အနောက်ဖက်။ ရေကန်။ မြောက်ဖက်။ ရေကန်။ အရှေ့ဘက်။ ရေကန်တို့သည်။ ရှေးက မယှိ။ ယခု အဂဿငလိပ်မင်းလက်ထက်မှ။ မြေကို တူးယူသော နေရာများသည်။ ယခု ရေကန် ဖြစ်နေကြသည်။ ရှေးက ကုန်းတှော မဟာရံတံတိုင်းနေရာ ဖြစ်သည်။
၃၀။ ဘုရားကုန်းတှော အရှေ့ဖက်။ ယခု သုဓမဿမာစရပ်နေရာသည်။ ကုန်းဘောင်ဘုရင် ဥယျာဉ်တှော နေရာ ဖြစ်သည်။ ရွှေကျင်မင်းကြီးဦးခိုင် လက်ထက်။ ၎င်းဥယျာဉ်တှောက။ ဒူးရင်းသီးထွက်၍။ ဒူးရင်းတှော ရှေ့တှောရောက် ဆက်သရသည်။ ၎င်း ဒူးရင်းဥယျာဉ်တှောမှူး။ မောင်နှော ဖြစ်သည်။
၃၁။ ဘုရားကြီးကုန်းတှော။ တနဂဿငနွေထောင့်ယှိ။ သွေးဆေးကန်ခှောသော ကျောင်းတိုက်သည်။ ရှေးကယှိရင်း ကျောင်းတိုက်ဟောင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းကျောင်းတိုက်တွင် သီတင်းသုံးတှောမူသော။ ဘုန်းတှောကြီးဘွဲ့။ ဦးသဒဿဓမဿမ ခှောသည်။ ကုန်းဘောင်မင်း။ ရန်ကုန်မြို့တွင် စံနေတှောမူ<စည်>။ သာသနာပိုင် ဦးညေယျက။ ဂိုဏ်းအုပ်အဖြစ်ကို ခန့်ထားတှော မူခဲ့သည်။ [မှတ်ချက်။ ရှေးအခာက "ဉ" ညကလေးကို ကျက်သရေမရှိဟု သတ်မှတ်ကြသောကြောင့် ညလေးသတ် နေရာများတွင် ညသတ်ဖြင့် အစားထိုး သုံးစွဲလေ့ ရှိကြသည်]
၃၂။ ဘုရားကြီးမြောက်ဖက်။ ယခုမြို့ပတ်လမ်းအနီးယှိ။ ဦးပြားတောရာ ဟူ၍၎င်း။ အလယ်တောရာ ဟူ၍၎င်း။ ခှောတွင်သော ကျောင်းတိုက်သည်။ ရှေးက တောင်ပိုင်ဆရာတှော၏။ တောရာကျောင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းကျောင်းကုန်း အနောက်မြောက်ထောင့် အရပ်တွင်။ ဘုန်းကြီး ဦးကြံတက်။ တောရာကျောင်း ယှိသည်။ ၎င်းကျောင်း မြောက်ဖက်က ရုပ်စုံတောရာကျောင်း ယှိသည်။ ယခု ဗိုလ်အိမ်နှင့် ခြံမြေ ဖြစ်လျက် ယှိသည်။
၃၃။ ဗောဓိကုန်း ခှောတွင်သည်မှာ။ ကုန်းဘောင်မင်း။ ရန်ကုန်မြို့တွင် စံတှောမူနေခိုက်အခာ။ သမီးတှောအကြီး အတုလဒေဝီ။ ပုဂံမင်းနှစ်မတှော။ ၎င်းမင်းသမီးက။ သီဟိုဠ်ကျွန်းက။ ဗောဓိညောင်ကို ပင့်ယူ၍။ အုတ်ပလဿလင်နှင့် စိုက်ထား ကိုးကွယ်တှော မူခဲ့သည်။ နောက်ဘုန်းကြီးကျောင်း တည်လာသောအခာ။ ဗောဓိကုန်းကျောင်းဟု ခှောတွင်လျက်ယှိသည်။ [မှတ်ချက်။ ယင်းဗောဓိကုန်းမှာ ယခုအခာ အင်းလျားလမ်းမှ ချိုးဝင်ရသော ဗောဓိရိပ်သာလမ်း အတွင်းပိုင်းပင် ဖြစ်သည်။ လမ်းပိတ် ဖြစ်သည်]
၃၄။ ဗောဓိကုန်းကျောင်းတိုက် မြောက်ဖက် မနီးမဝေးတွင်။ ကျုံးယောင်ယောင် ထင်ရသည်။ ၎င်းကျုံးခြားလျက်။ မြို့ရိုးယောင်ယောင် အရှေ့အနောက်။ လျားလျက် ယှိသည်။ ၎င်းမြို့ရိုး မြောက်ဖက်အတွင်း။ ဘုရားငုတဿတို အရှေ့အနောက်တန်းလျက်။ ငားဆူယှိသည်။ ရှေးက ငားဆူတောဟူ၍ ခှောတွင်သည်။ ကုန်းဘောင်ဘုရင် အမိန့်အရ။ တာဝန်း။ ၁၀၀၀ ပတ်လည် ပိုင်းခြား၍။ ငားဆူတောမြေကို။ တိကုန်စေတီတှောမြတ်အား။ ဝတဿထုကံမြေအဖြစ် လှူဒာန်းတှော မူခဲ့သည်။
၃၅။ ဘုရားကြီးကုန်းတှော စနေထောင့်။ ယခု မြင်းပြိုင်ကွင်း။ အဂဿငလိပ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း တောင်ဘက်က။ ပေတရာလမ်းသည်။ ယခု စတူးဝက်လမ်း ခှောသည်။ ၎င်းအရှေ့ဘက် တက်သွားသော လမ်းသည်။ ရှေးက ကုန်းဘောင်မင်း မြို့တည်။ နန်းစိုက် စံတှောမူစည်က။ နန်းတှောရှေ့လမ်း ခှောတွင်သည်။ ရှေးကလမ်းဟောင်း ဖြစ်သည်။ နန်းတှောနေရာသည် အဂဿငလိပ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၏ တောင်ဘက် မြင်းတာပတ်လမ်းထိပ်က ပေတရာလမ်းပှောကျလျက် ရှေးကယှိသည်။
၃၆။ ဆူးလေဘုရားလမ်း။ မီးရထားဂုန်းတံတားကြီးမြောက်ဖက်။ ဆေးဆရာဝန်နေသော အိမ်ကုန်းသည်။ ရှေးက နန်းတှောကုန်း ခှောသည်။ မည်သည့်မင်း စံတှောမူသည်ကို စုံစမ်း မရပာ။ ကုန်းဘောင်မင်း စံတှောမူစည်က။ ၎င်းနေရာတွင်။ သားတှော ပုခန်းမင်းသားကြီး။ အိမ်တှောဆောက်လုပ် စံနေတှောမူကြောင်းကို ပြောကြသည်။ [မှတ်ချက်။ အောင်ဆန်းကွင်း အနောက်ဘက်ရှိ ကုန်းကြီး ဖြစ်မည်။ ယခုအခာ ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ နိုင်ငံခြားစာသင်ကျောင်း၊ အိမ်ရာများ ဖြစ်နေပြီ]
၃၇။ ယခု မြို့ပတ်လမ်းခှော။ ဝင်တဆှောလမ်းမြောက်ဖက်။ ကပ်လျက်ရှိသော ကျောင်းတိုက်သည်။ ရှေးက ရှင်စောပုသုသာန်ကျောင်း ခှောတွင်သည်။ နောက် သုသဿသန်ကျောင်း ခှောသည်။ ၎င်းကျောင်း မြောက်အနိမ့်တွင် ဘုရားငုတဿတိုယောင်ယောင် ယှိနေသည်မှာ။ ရှင်စောပုအရိုးအုတ်နန်းပြသာဒ်ဟု ရှေးက ခှောတွင်ကြသည်။ [မှတ်ချက်။ ထိုဘုရားကို ယခုအခာ စမ်းချောင်း City Mart နောက်ဘက်မှ ဝင်သွားပာက ပထမဆုံး တွေ့သောလမ်း (ရှင်စောပုဘုရားလမ်း) တွင် တွေ့နိုင်သည်]
၃၈။ ရှေးက ရန်ကုန်မြို့ မြစ်ဆိပ်ကမ်း တလျောက်တွင်။ လူနေအိမ်ခြေ စည်ကားလျက် ယှိသည်။ ၎င်းကမ်းနားတွင်။ အရှေ့အနောက် လျားလျက်ယှိသော အရပ်များကား။ ဝားတန်းကြီးရပ်။ ကျောက်တံတားရပ်။ ပုဆိုးတန်းရပ်။ ကုန်သေးတန်းရပ်။ စာဆိုတန်းရပ်။ စပ်တန်းရပ်များ ယှိကြသည်။ ကုန်းဘက်က မဂဿငလာဈေးရပ်။ ရွှေပြည်မှန်ကင်းရပ်။ ယှံးတံတားရပ်။ ရန်ပုံကွင်းရပ်။ မြေထဲးမင်းကြီး ဦးကျှောရွေး အိမ်ဝင်းတှော။ ပုဇွန်ထောင်။ ဗိုလ်တထောင် အရပ်များ ယှိသည်။ ပုဇွန်ထောင် အရပ်သည် ရှေးက ပုဇွန်ထောင် စားသောက်နေထိုင်ကြသောသူတို့ အရပ်ဖြစ်သည်။
၃၉။ ၁၂၁၄ခုနှစ်။ အဂဿငလိပ်မင်း ကြီးစိုး၍။ ဆူးလေစေတီမြတ်ကို မဏဿဍိုင်ထားပြီးလျှင်။ မြို့ကွက်နေရာ ပေးသောအခာ။ ဝားတန်းကြီးရပ်က လူများနေ၍ ယခု ဝားတန်း ခှောသည်။ ကျောက်တံတားရပ်က လူများနေ၍။ ယခု ကျောက်တံတား တွင်သည်။ ပုဆိုးတန်းရပ်က လူများနေ၍။ ယခု ပုဆိုးတန်းတွင်သည်။ ကုန်သေးတန်းရပ်က လူများနေ၍။ ယခု ကုန်သေးတန်း တွင်သည်။ စာဆိုတန်းက။ လူများနေ၍။ စာဆိုတန်း တွင်သည်။ စာဆိုတန်းသည်။ ရှေးက စာဆိုစီကုံးတတ်သော ကဗျာဆရာတို့ နေသည်ကို အစွဲးပြု၍။ စာဆိုတန်း တွင်သည်။ အမိန့်တှောရ ဦးပုတ်နီတို့ သားချင်းတစုသည်။ စာဆိုသီကုံးနိုင်သော အရာနှိုက် ကျှောစောကြသည်။
၄၀။ ရန်ကုန်မြို့ ကမ်းနား အလံတင်ရာနေရာတွင်။ ရှေးက။ ဖောင်တှောတံတား ယှိသည်။ ၎င်းအနောက် စဉ့်အိုးဝန်တံတား။ ၎င်းအနောက် မအောင်တံတား။ ၎င်းအနောက် မဧးသာတံတား။ ၎င်းအနောက် ခွေးချေးတံတား။ ၎င်းအနောက် ရံပုံကွင်းတံတား။ ၎င်းအနောက်။ ဦးမှုံ့တံတား။ ၎င်းအနောက်။ ဦးကွေးတံတား။ ၎င်းအနောက်။ အာဝတ်ကျင်းတံတား။ ၎င်းအနောက်။ ယှံးတံတား။ ၎င်းအနောက်။ ဗုံအိမ်တံတား။ ၎င်းအနောက် တံတားတှောကြီး။ ၎င်း တံတားတှောကြီးသည် ကုန်းဘောင်မင်း တက်တှောမူသော တံတားတှောကြီး ဖြစ်သည်။ ဘောင်တှောတံတားကား။ ရှင်ဘုရင် ဘောင်တှော ဆိုက်ကပ်တှောမူသော တံတားဖြစ်သည်။ ကမ်းနားဈေးအနောက်။ ယခုစက်ရုံကြီးတည်သော နေရာတွင်။ ရှေးက ရန်ပုံကွင်းတံတား ယှိသည်။ ၎င်းတံတားက။ လက်အောက်မင်းငယ်များ တက်ရသောတံတား ဖြစ်သည်။
၄၁။ ယခု နာရီစင်နှင့် တည်ယှိသော။ သိမ်ကြီးဈေးခှောသော နေရာတွင်။ ဆူးလေစေတီထက်ကြီးသော ဘုရားစေတီတဆူ ယှိသည်။ တိကုန်စေတီ၏ နောင်တှောကြီးခန့် ယှိသည်။ ၎င်းဘုရားကုန်းမှာ အုတ်သားကို ဆူးလေစေတီကုန်းကဲ့သို့ မြှင့်ထားသည်။ မဟာရံတံတိုင်း သစ်သားကို ကာရံထားသည်။ ၎င်းဘုရားအနီးတွင်။ သခွတ်ပင်ကအစေး ကျောက်သီးကဲ့သို့ ထွက်နေသည်ကို အစွဲပြု၍။ တလိုင်းဘာသာ။ ကျိုက်မဲးသံကရော ခှောတွင်။ ယခု ကျိုက်မဲးသံချိုဟု ပြောကြသည်။ ဘုရားအရှေ့ကပ်လျက်။ ရဟနဿတာများ သမုတ်သော သိမ်တလုံး ယခုတိုင် တည်ယှိသည်။ ဘုရားပတ်လည်။ အဆင့်နဲ့။ မြေအုတ်ကြွပ်မိုးသော စရပ်များယှိသည်။ ယခု သိမ်ကြီး၏ မြောက်ကပ်လျက် ဘုရားကုန်းတှောကို တက်ရန်။ ဘုရားအရှေ့စောင်းတန်းလမ်း ယှိသည်။ ၎င်းပြင်။ တောင်။ မြောက်။ အနောက် စောင်းတန်းလမ်းများလဲး ယှိသည်။ [မှတ်ချက်။ သိမ်တှောကြီးမှာ ယနေ့မြင်တွေ့နေရဆဲ သိမ်တှောကြီးပင် ဖြစ်ပြီး၊ ယခင်ဘုရားစေတီ နေရာမှာ ယခု ၂၅ လမ်း၊ ၂၆ လမ်း အထက်ဘလောက် ဘယဆေးဆိုင်တန်းများ နေရာတွင် ဖြစ်ပေမည်]
၄၂။ ၁၂၁၆ ခုနှစ်က။ ကျိုက်မဲးသံချိုဘုရားကို။ ကုလားများက။ အထက်ကြေးဝိုင်းကစ၍ တူးဖှောဖြိုချပာသည်။ ထိုအခာ။ ဘုရားရောင်ခြည်တှောတို့သည်။ ထွက်ပှောကွန့်မြူး၍။ ဆူးလေစေတီတှောသို့ အရောက်။ တန်းလျက် အတှောကြာ ယှိနေပြီးနောက်။ ကုလားများက ကြိုးနဲ့ချည်၍ ဆွဲးချရာ။ တောင်ဘက်မျက်နှာသို့ လဲးပြိုကျပာသည်။ [မှတ်ချက်။ ခရစ်နှစ် ၁၈၅၄ ခုနှစ်တွင် ဖြစ်သည်]
၄၃။ ရွှေဆိုင်းတန်းဈေး။ ဈေးချို။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဈေး နေရာများသည်။ ရှေးက။ ဘုန်းကြီးဦးပုည ကျောင်းတိုက်နေရာ ဖြစ်ပာသည်။
၄၄။ ယခု ထောင်ကြီးတောင်ဘက်။ တောင်ယာနေရာသည်။ ရှေးက ဝန်ထောက်ကလေးကျောင်းတိုက် ခှောသည်။ ၎င်းကျောင်းတိုက်တွင် ဘုန်းကြီးဦးပေ ကျောင်းထိုင် သီတင်းသုံးတှောမူသည်။ တီးလိုက်ဘုံပွေ။ မလမ်းလင်နေ။ ဘုန်းကြီးဦးပေ။ နှင်းဝေဝေ သေငယ်ဇော။ ဦးပေမော ဇောချွေးပြန်။ ဟု ရှေးက လူကြီးလူငယ်တို့ သီဆိုကြသည်။ အဓိပဿပာယ်ကို မပြောနိုင်ကြပာ။
၄၅။ ယခု ကျုံးကြီးလမ်းနှင့်။ ဘုန်းကြီးလမ်းဆုံ နေရာတွင်။ ရှေးက ဘုရားငုတဿတို တဆူ ယှိသည်။ ၎င်းဘုရားငုတဿတို ဖျက်၍ လမ်းပြုလုပ်လေသည်။ ၎င်းလမ်းကို။ ယခု ဘုရားငုတဿတိုတန်းဟု အခှောများကြသည်။ ၎င်းလမ်း အနောက်ဖက်။ ရှေးက မြမဿမာသင်းချိုင်းနေရာ ဖြစ်သည်။ ယခု အိမ်ခြေ စည်ကားလျက် ယှိသည်။
၄၆။ ခွေးသေဝဘုရားကို။ တလိုင်းဘာသာ။ ကျိုက်ကမာကမု ခှောသည်။ မြမဿမာလို။ ကျိုက်က ဘုရား။ ကမာက ရေကန်။ ကမုက ကင်ပွန်းပင်။ ခှောသည်။ အဓိပဿပာယ်မှာ ကင်ပွန်းပင်ရေကန်ဘုရား ခှောသည်။
၄၇။ ယခုခှောဝှောသော ဗိုလ်တထောင်ဘုရားကို။ ကျိုက်ဒေးအဲး ခှောသည်။ မြမဿမာလို။ ကျိုက်က ဘုရား။ ဒေးက ကုန်း။ အဲးက သာချင်းသီတို့ နေရာ။ အဓိပဿပာယ် သာချင်းသီတို့နေရာကုန်းဘုရား ဆိုလိုသည်။ ၎င်းဘုရားကို သီဟဒီပမင်း၏ သရဲးကြီးတည်သော ဘုရားဖြစ်သည်။ [မှတ်ချက်။ သာချင်းသီ= သာချင်းသီဆိုတတ်သူများ]
၄၈။ အထက်ကအပိုဒ် ၁၅ တွင် ဖှောပြသော ထောင်ကြီးအနောက်ဖက်။ ရေခဲးစက်ရုံအနီး တောင်ကုန်းတွင်။ ရှေးကတည်ယှိသော ဘုရားငုတဿတိုသည်။ တလိုင်းဘာသာ။ ကျိုက်ဒေးတဲး ခှောသည်။ မြမဿမာလို။ ကျိုက်က ဘုရား၊ ဒေးက ကုန်း။ တဲးက ကျောက် ခှောသည်။ အဓိပဿပာယ်မှာ။ ကျောက်ကုန်းဘုရား ဆိုလိုသည်။ [မှတ်ချက်။ အပိုဒ် ၁၅ လည်း ရှုပာ]
၄၉။ ယခု ဒာလဟိုဇီလမ်းနှင့် လမ်းမတှောလမ်း ဆုံးရာ။ အနောက်မြောက်ထောင့်။ စတုဘုမဿမိကဆေးတိုက်။ တကဿကသိုလ်ဆေးတိုက် နေရာများသည်။ ရှေးက ဘုရားတိုက် အုတ်ရိုး ရုပ်ပွားတှောများ ယှိသည်။ ၎င်း အနောက်နားက ကျောင်းတိုက် စရပ် ရေကန် ခြသေဿင့ရုပ်များ ရှေးကယှိသည်။ [မှတ်ချက်။ ဒာလဟိုဇီလမ်းသည် ယခု မဟာဗနဿဓုလလမ်း။ ယခု သံဈေးရှေ့ နေရာများ ဖြစ်ပေမည်။]
၅၀။ သွေးဆေးကန် ခှောတွင်သည်မှာ။ သိဂဿငုတဿတရကုန်းတှောကို။ ဥကဿကလာပမင်းကြီးနှင့်တကွ။ ဘုရားတည်ရန် တောချုံများကို သုတ်သင်ယှင်းလင်းကြရာ။ ဗိုလ်ခြေတို့ ဖျားနာကြသောကြောင့်။ ၎င်းဖျားသော ဝေဒနာတို့မှ။ ပပျောက်ရန်။ သိကြားမင်းက ရေကန်ဖန်ဆင်း၍ သွေးဆေးများကို ခတ်ထားလေသည်။ ၎င်းကန်ကရေကို ဗိုလ်ခြေတို့ သုံးသောက်ကြရသဖြင့်။ အဖျားဝေဒနာ ကင်းယှင်းကြလေသည်။ ၎င်းကန်ကို သွေးဆေးခတ်သည်ကို စွဲး၍။ သွေးဆေးကန်ခှောတွင်ကြောင်း ပြောကြသည်။ ယုတဿတိယှိလှ၏။ ဘုရားသမိုင်းတွင်မဆို။ တလိုင်းဘာသာမဟုတ်။ မြမဿမာဘာသာ ခှောတွင်လေသည်။ [မှတ်ချက်။ ယင်းသွေးဆေးကန် ဆိုသည်မှာ ယခု သိမှတ်နေကြသော ရွှေတိဂုံဘုရား အရှေ့မြောက်မုခ် အာဇာနည်ဗိမာန်နားမှ ကန်ကြီး မဟုတ်ချေ။ သွေးဆေးကန်အစစ်မှာ။ အုတ်မဟာရံတံတိုင်း ကာထားသော။ ရေကန်ငယ်ကို ဆိုလိုသည်။ အမှတ် ၂၇ လည်းရှု။]
မှတ်ချက်။ အထက်ပာ အချက် ငားဆယ်ကို JBRS တွင် မှောဖီဆရာသိန်း ရေးခဲ့သည့်အတိုင်း ဖှောပြထားခြင်း ဖြစ်ပြီး အောက်ခြေ မှတ်ချက်များမှာ ယခုခေတ်ကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကာ ကိုယ်ပိုင် သုံးသပ်ချက် ထုတ်ထားခြင်း ဖြစ်ပာသည်။ လွဲမှား လိုအပ် ချွတ်ချှောခြင်းများ ရှိလျှင် ပြင်ဆင်ကြပာကုန်။
ရန်ကုန်မြေပုံ။ ၁၈၉၃၊ ၁၉၁၂၊ ၁၉၁၄၊ ၁၉၂၄၊ ၁၉၃၂
Posted by NLS at 2/16/2012 10:34:00 PM4comments Links to this post
Rangoon: Extracted from Twentieth Century Impressi...